Dhaqaalaha dalka Giriiga oo weli cakiran - BBC News Somali
Dhaqaalaha dalka Giriiga oo weli cakiran
22 Juunyo 2015
Image caption Dalka Giriiga mudaba waxaa haysatay dhaqaale xumo
Waxaa aad u kordhaya rajada laga qaba shirka degdega ah ee maanta looga arrinsanayo dhibaatada dhaqaale dalka Greega haysata.
Gudoomiyha arrimaha dhaqaalaha midowga yurub Pierre Moscovici ayaa sheegay in madaxda midowga yurub ay xal ka gaari doonan ra'yi soo jeedinta ay soo gudbisay xukkumada Greega, Maalintii axada.saraakiisha ayaa arrintan ku tilmaamay horumar wanaagsan oo la gaaray.
Waxaa jirta yididiilo wanaagsan balse uu taxadar ku jiro oo ku aaddan in heshiis lagu gaari doono shir madaxeedka aan caadiga ahayn ee Madaxda Midowga Yurub ay maanta ka yeelanayaan xiisadda ka taagan deynta uu qabo dalka Giriiga.
Madaxda Gudiga Yurub, Jean-Claude Juncker, ayaa sheegay in wax xooggaa hormar ah laga gaaray arrinta Giriiga, balse aanu sheegi karin in heshiis buuxa laga gaari doono.
Xubin ka tirsan baarlamaanka Yurub, kuna mataleysa dalka Netherlands, Sophia In't Veld, ayaa BBC-da u sheegtay in ay ku rajo weyntahay in aakhirkii uu Giriiga ka bixi doono mushkiladan dhaqaale ee haysata.